अनुहार र कपाल स्वास्थ्य राख्न चाहनुहुन्छ ? यसाे गर्नुहाेस् | नेपालन्युज
अनुहार र कपाल स्वास्थ्य राख्न चाहनुहुन्छ ? यसाे गर्नुहाेस्
अनुहारको छाला गोरो बनाउनका लागि बजारको महंगो सामग्री किन्नुहुन्छ होला या यस्तै कपाल लामो र बक्लो बनाउन विभिन्न ब्रण्डका स्याम्फूहरु प्रयोग गर्नु हुन्छ होला । तर केही यस्ता घरेलु उपायहरु छन् जो यी महंगा सामग्रीले भन्दा धेरै काम गर्छ ।
-नियमित रूपमा अनुहारमा चरी लगाउनु भयो भने तपाइको छाला नरम बनाउँदछ। यदि तपाईंको छाला ओइली छ भने अमिलो चेरीको प्रयोग गर्नुहोस् । एउटा कचौरामा केही चेरी लिनुहोस् । त्यसमा एक चम्चा मह र केही थोपा कागती राख्नुहोस् ।त्यसलाई मिक्स गरी फेस प्याक बनाएर अनुहार घाँटीमा लगाउनुहोस् र ५ मिनेटपछि मनतातो पानीले धुने । यसो गर्दा तपाईको अनुहारमा चमक ल्याउछ ।
-कपाल सिल्की बनाउनका लागि थोरै दुधमा मह मिसाएर कपालमा लगाउनुहोस् । लगाएको ५ मिनेट पछि कपाल धुनुहोस् । यो पेस्टलाई लामो समय कपालमा राख्नु हँुदैन । महले तपाईको कपालको रंगलाई उडाउन सक्छ ।
कपाललाई रेश्मी बनाउनको लागि महको दूधमा तपाईको कपालको लम्बाइ अनुसार केरा मिसाउनुहोस् र टाउकोमा लगाउनुहोस् । र ५ मिनेट पछि पखाल्नुहोस् । यो पेस्टलाई लामो समयसम्म टाउकोमा नछोड्नुहोस्, किनभने महले तपाईंको कपालको रंग हल्का गर्न सक्छ। यसो गर्दा कपाल झर्ने समस्या पनि हराएर जान्छ ।
थप २ हजार २३७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८ जनाको मृत्यु
कपाल झर्छ ? यसरी बनाउनुस् मेथीको पेस्ट (बनाउने विधि)
निउरो खानुहोस्, यस्ता छन् फाइदाहरु